नयाँ किताब Archives - प्रतिविम्ब.com
(नयाँ किताब) अनाकाङक्षित घटना वा कार्यहरु जब समाजलाई कलुषित पार्ने कारण बन्दछन्, तब समाजमा एउटा स्रष्टाले लज्जित र अपमानित भएको महशुस गर्दोरहेछ । जब द्रष्टाले आफ्नो क्षोभलाई संयमका साथ हास्य रसमा भिजाएर लिपिबद्ध गर्दछ तब व्यङ्ग्य रचनाको सृष्टि हुँदोरहेछ । यही समाज र समयको अग्लो होचोलाई थाक्दै नथाकी हास्यव्यङ्ग्यको माध्यमबाट सम्याउन तम्सिएका असमको विश्वनाथ
नवीन पौड्यालकृत ‘साहित्य सन्धान’-को लोकार्पण
प्रतिविम्ब न्यूज कालेबुङ 27 अक्टोबर। नवीन पौड्यालकृत ‘साहित्य सन्धान’को लोकार्पण गरिएको छ। गोर्खा दुख निवारक सम्मेलन भवनमा आयोजिक कार्यक्रममा पेदोङ सरकारी कलेजका प्राध्यपक नवीन पौड्यालको चौथो कृती ‘साहित्य सन्धानको लोकार्पण गरिएको हो। यस यस अवसरमा मुख्य अतिथिका रूपमा डा. डीक बी देवान उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रमलाई साहित्यकार डा राजेन्द्र भण्डारीले अध्यक्षता गरेका थिए। यस
शमसेर अलिकृत तेस्रो कथासङ्ग्रह ‘हुटिट्याउँ’-को सार्वजनिक
प्रतिविम्ब न्यूज कालेबुङ2सितम्बर। शमसेर अलिकृत तेस्रो कथासङ्ग्रह ‘हुटिट्याउँ’-को सार्वजनिकिकरण गरिएको छ। होटल सिल्भर ओक्समा आयोजित कार्यक्रममा उनको तेस्रो कृति ‘हुटिट्याउँ’ – को साहित्यकार पेम्पा तामाङ, डा. कविता लामा, सञ्जय विष्ट, ज्ञान, कवि राजेन्द्र भण्डारी, सुतार आदिको बाहुलिबाट सार्वजनिकिकरण गरिएको हो। कार्यक्रममा मुख्य अतिथिका रूपमा साहित्यकार पेम्पा तामाङ उपस्थित रहेका थिए भने कार्यक्रमलाई कथाकार
बालकलाई ईश्वरको रूप मानिएको पनि पाइन्छ। अबोधपन नै बालमनोविज्ञान अध्ययनका निम्ति प्रमुख विषय हो। विश्वका विकसित जातिका परिचय प्राप्त गर्नु हो भने उनीहरूको बाल-साहित्यलाई हेर्दा पनि निक्कै कुरो प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यस दृष्टिले नेपाली जाति निक्कै पछाडिएका हौँ। औपनिवेशीकरणका कारण हाम्रा विद्यालयतिर पनि विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजीका राइम्सहरूबाट आफ्नो अध्ययनक्रम सुरु गर्न परिरहेछ। ढिलै भए तापनि वर्तमानमा
आसामको नेपाली गजल
नेपालमा मौलाउने ठाउँ पाइसकेपछि भारतमा पनि नेपाली गजल लेखनले जरा गाडेको हो। भारतमा तर शुरुमा दार्जीलिङ्गतिर र सिक्किमतिरमात्र गजल लेखिन थाल्यो। गजलका किताबहरू र गजलका सैधान्तिक अवधारणाका किताबहरू पनि निस्कियो| बल गजल पनि लेखियो। गजल लेखनको लोकप्रियता बिस्तारै भारतको पूर्वोत्तरतिर पनि फैलिंदै गयो। कालान्तरमा। प्रस्तुत छ आसामका पाँच युवा गजलकारहरू राजु नेउपाने, बिप्लब चिमरिया, सन्तोष
खस भारतीय हितकारी सम्मेलनको सभा
शहीद दिवसलाई गोर्खाल्याण्ड संकल्प दिवसको रूपमा पालन गरौँ – क्रामाकपा